Toerana ho any ve ianao? Fivoahana ve? Sa Famantarana fotsiny? | Martech Zone
Alahady, Septambra 22, 2013 Alahady, Septambra 22, 2013 Douglas Karr
Ny fahatsapana ny atao hoe marketing amin'ny Internet tokony tsy mitovy amin'ny orinasa sy orinasa hafa. Manana mpanjifa tena afa-po amin'ny fananana tranokala brochure tsotra fotsiny izy ireo hahafahan'izy ireo manamarina ny lisitry ny varotra ananany fa manana tranokala mahafinaritra izy ireo. Fomba fijery mampalahelo izany, fa ny sasany mbola miady amin'ny fahazoana ny toetoetran'ny tranonkala ary mitohy miantehitra amin'ny andrana sy ny marina izy ireo nentim-paharazana paikady marketing. Te-hamoaka fampitahana izay noeritreretiko hatry ny ela aho - mamerina antsika amin'ilay fampitahana superhighway.
Ny paikadim-barotra amin'ny Internet dia mety ho a famantarana, ny Fivoahana na ny toerana halehany ho an'ny prospect sy ny mpanjifa. Ny tetika tsirairay dia samy manana ny vidiny sy ny tombony azo avy aminy. Ny loharano dia mitaky loharano kely ary manome valiny kely. Mila bebe kokoa ny fivoahana. Ny toerana aleha betsaka tokoa. Ahoana no ahafahanao manapa-kevitra hoe inona ny paikadinao?
Mba hanomezana loko ity ohatra ity dia ndao lazaina fa hividy sy hametraka HD Philips 55 ″ aho. Noho izany, manao fikarohana momba ny vokatra sy ny fampahalalana aho mba hividianana fividianana tsara, ary hianatra ny fomba fananganana azy ary hampiasana azy.
Philips: Ny famantarana
Tranonkala Philips dia Sign. Aza avela ny vidiny na fampahalalana momba ny toerana hividianana, inona no kojakoja ampiasaina, na horonantsary momba ny fampiasana ny vokatra - brochure niomerika fotsiny ity tranonkala ity. Na dia tranonkala natao tsara tarehy aza izy io, zara raha misy ny hetsika. Raha ny marina dia olona 4 ihany no nandinika ny vokatra… miaraka amin'ny hevitra ratsy sasany. Vaky ihany koa ny pejy… milaza fa misy hevitra 0 raha misy tena izy 4.
Newegg: Ny fivoahana
Ho fanampin'ny pitsopitsony ara-teknika hitanao ao amin'ny Philips, Newegg dia manolotra fotoana hividianana, hijerena ireo vokatra mitovy amin'izany ary hijery ireo hevitra (na dia tsy misy aza). Raha ny vidin'ny Newegg, ny fandefasana entana ary ny fiverenana dia tsara - eto no ivoahanao. Raha tsy izany dia miverina eny amin'ny arabe ianao ary mitady toerana hafa hahitana ny vaovao na hanao ilay fividianana.
CNET: Ny tanjona
Zahao ny valin'ny fikarohana ary azonao atao ny milaza hoe iza no orinasa nametraka bebe kokoa amin'ny fanatsarana ny motera fikarohana. Ny fidiran'ny CNET dia misy sombin-javatra manan-karena ho an'ny tsikera sy ny vidiny, ary koa ny mpamorona:
Ny pejin-kevitra dia lalina sy mahatalanjona… miaraka amin'ny tsikera CNET, tsikera nataon'ny mpampiasa, fanehoan-kevitry ny mpampiasa, fahaizana manaraka ny fanovana eo amin'ny pejy, horonan-tsary, torolàlana momba ny fampiasana, fampidirana lalina ara-tsosialy (miaraka amina fifandraisana betsaka), sary an-taonina maro ny rafitry ny menio, safidy maromaro momba ny toerana hividianana, ny vidiny ankehitriny, ny famintinana ny famerenana, ny fampitahana ny marika hafa, ny teknika teknika (mihoatra ny tranokalan'ny Philips!) ho fanampin'ny fandinihana amin'ny antsipiriany ataon'ny mpanoratra iray manana sary sy biolojia .
Na dia tsy tena afaka mividy amin'ny CNET aza ianao dia ity no toerana itodiana. Mety hitsambikina avy amin'ity tranokala ity ny olona raha tsindrio ny bokotra fividianana any Amazon na amin'ny toeran-kafa, fa teo no nahitan'izy ireo ny fampahalalana nilaina sy ny fiverenany amin'ny manaraka.
Fividianana tsara indrindra: Ny tsy fahombiazana
Ny Best Buy dia tsy miraharaha na nividy ny vokatra ianao na tsia… aorian'ny varotra vaovao ihany. Ka - hadino ny zava-misy fa manana karatra valisoa Best Buy aho ary mety te-hahita fampahalalana fanampiny momba ny fividianana nataoko tao amin'ny fivarotanao. Tsy misy lasopy ho anao.
Philips dia afaka nanangana pejy mahavariana - miaraka amin'ny horonan-tsary, torolàlana, kojakoja ary famerenana tsy miankina ataon'ireo mpitarika ny indostria. Na azon'izy ireo natao ny nanamboatra tranokala sy hevitra hafa momba ilay pejy. Angamba ny endrika tsy hita manintona indrindra tsy hita dia ny fahaizana mahita vidiny tsotra fotsiny ary tsindrio hividy amin'ny fivarotana mitondra ny vokatra.
Raha toa ka mahasoa ny CNET amin'ny fiankinan-doha amin'ny fidiram-bolan'ny dokambarotra sy ny mpiara-miasa dia azo antoka fa afaka manatsara ny pejin'izy ireo ireo tranonkala etsy ambony mba handraisana ireo endri-javatra sy atiny ilaina mba ho toerana iray haleha.
Ahoana no fomba hanarenanao ny tranokalanao hiantohana fa toeran'ireo mpitsidika mikaroka na mividy eo amin'ny indostriao io? Heveriko fa orinasa be loatra no mihevitra ny tenany ho fivoahana ary toa mifanandrify na mandresy ny fifaninanana amin'ny maha-izy azy ireo tsara kokoa Fivoahana. Fa maninona no tsy ho any?